Caffeen kabajamaan kun guyyaa har’aa Af-Yaa’ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’ee akkan tajaajilu ergama naa kennuusaatiif ummata Oromoo aadaafi seenaa boonsaa qabu kanaafi sabaafi sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan biroo tajaajiluuf filatamuun carraafi ulfina guddaa waan ta’eef Caffee kabajamaa kana galateeffachaa, gammachuu guddaa natti dhagahames ibsuun barbaada.
As irratti, ergama guddaafi amaanaa ulfaataa yeroo murteessaa kana keessatti naaf kenname itti gaafatamummaafi amanamummaa, akkasumas, kutannoo olaanaadhaan bahachuuf qophaa’aa ta’uu koo ibsaa, mul’ata cimaafi ergamoota gurguddoo Caffeen qabatee hojjetaa jiru milkeessuun kan danda’amu sochii namni muraasi taasisuun waan hin taaneef; galma gahiinsa ergamoota kanneeniif hundi keenya harka walqabannee akka sochoonu waamicha koo dabarsa.
Filannoon marsaa 6ffaa injifannoowwaniifi qormaatilee adda addaatiin marfamee akka gaggeeffame hundi keenya kan yaadannuudha.
Gama tokkoon, paartileen morkattootaa naannoo keenyatti ni dorgomu jennee yaanne sababoota xixiqqaa funaanuun filannoo keessaa of-baasuun filannichi qaamolee adda addaa biratti fudhatama akka dhabu taasisuuf haalli hojjetaa turan mul’atee jira. Gama biraatiin ammoo, haala birmadummaa ummata keenyaa sarbuun mootummaan ce’uumsaa hundaa’uu qaba gaaffii jedhu kaasuun karaa qaxxaamuraatiin gara aangootti bahuufis yaaliin taasisan salphaa hin turre.
Haa ta’u malee, humnooti badii yoo danda’an jeequmsa kaasuun adeemsi filannichaa akka gufatu hojjechuu, filannichi yoo adeemsifame ammoo; adeemsaafi bu’aan isaa hawaasa addunyaa biratti beekamtii akka hin arganne taasisuuf kaaroorsanii hojjetaa kan turan ta’us; ummanni keenya akeeka qaamolee kanneenii sirriitti akka hubatu waan taasifameef kaayyoon isaanii kun osoo hin milkaa’in hafeera.
Kanaanis, ummanni roobaafi aduun osoo isa hin daangessin, hiriirri dheeraan osoo isa hin nuffisiisin hanga halkan qixxeetti turuun kaardii isaatiin qaama barbaadu filachuu waan danda’eef; ummata diina qaanesse kanaaf kabajaafi ulfina olaanaa qabu maqaa kabajamaa Caffee fi maqaa kootiin ibsuun barbaada.
Bifuma walfakkaatuun, hojii kana keessatti ummanni yaaddoo nageenyaa tokko malee akka galmaa’uufi dhiibbaa qaama kamirraayyuu bilisa ta’ee paartii barbaadeef sagalee isaa kennuu akka danda’u taasisuu keessatti milishaan, humni addaa, poolisiin idileefi miseensoti Gooticha Raayyaa Ittisaa hojii ummata keenya boonse waan hojjettaniif kabajaafi galata guddaatu isiniif mala.
Kanaaf, bu’aan filannoo kanaan argame kun miira moo’annaa caalaa itti gaafatamummaan ummati nuu kenne guddaa ta’uusaa; miira injifannoo caalaa amaanaan ummati nuuf kenne ulfaataa ta’uusaa kan nuu mirkaneessu ta’uu hubannee yeroo, beekumsaafi humna qabnu mara walitti qindeessun fayyadamummaa ummata keenyaa qabatamaan dhugoomsuuf hojjechuu qabna.
Kanaan walqabatee, Ergaa ummanni keenya filannoo kanarratti dabarse kallattii fuula duraaf akeekne milkeessuuf akka nu gargaaru sirnaan hubachuun barbaachisaa ta’a. Ummanni keenya kan nu filate paartiin keenya mudaa hin qabu jedhee miti. Rakkoon bulchiinsa gaarii ummati kaasu waan isaaf furameefis miti. Tajaajila nuti kenninuttis quufee akka hin taane hojiin gama kanaan nu hafu akka jiru hundi keenya kan beeknudha.
Ummanni hanqinoota qabnu bareechee beeka. Gaggeessitoota seera hin kabajne, itti gaafatamummaa isaanii sirnaan hin bahanne akka jiran sirriitti adda baasee beeka. Kanaaf, ummanni sagaleesaa kan nuuf kenne gama tokkoon, akka of-sirreessinuufi keessoo keenya qulqulleessinu nu akeekkachiisaa yoo ta’u; gama biraatiin ammoo, hojiiwwan gaggaarii eegalle akka goolabnuufi jijjiiramaan walqabatee hojiilee sadarkaa murteessaarra gahan yeroo itti aanu keessatti akka xummurruf ta’uusaa fudhannee yeroo kamuu caalaa onnannee hojjechuuf akka qophoofnu dhaamsa koo dabarsa.
Nageenya naannoo fi biyya keenyaatiin walqabatee, yeroo ammaa, humnooti shororkeessaa TPLF fi ergamaan isaa ABO Shaneefi fakkaattonni isaa, adda tokkotti sassaabamuun ummatarratti waraana kan banan yoo ta’u; iddoo adda addaatti walitti bu’iinsa uumuun, nagaafi tasgabbiin akka hin mirkanoofne taasisuun, diigumsa biyyaarratti bobba’anii argamu.
Akkuma hundi keenya beeknu, misooma barbaadamu fiduufis ta’ee ijaarsa sirna dimokiraasii eegalle lafa qabsiisuuf hunda dura nageenya waaraa mirkaneessun dhimma murteessaadha.
Kanaaf, nageenyi keenya misooma keenya ta’uusaa hubannee, waan qabnu hundaan Gooticha Raayyaa Ittisaafi humnoota nageenyaa biroo deeggeruuniifi bira dhaabbachuun akkuma jalqabametti cimee kan itti fufu ta’ee; hojiin nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuufi olaantummaa seeraa kabajsiisuu ammallee dhimma ijoo fi hojii xiyyeeffannaa addaatiin itti fufu ta’a.
Hojiileen misoomaa waggoottan darban raawwatamaa turan jijjiirama abdii qabeessa fiduu kan jalqaban ta’us, rakkoolee hawaas-dinagdee hiddasaanii gadifageeffataniifi bara dheeraaf kuufamaa turan gahumsaan hiikuurratti ammallee hanqinaaleen jiran bal'aa fi fuuladurattis hojii guddaa kan nu gaafatan ta'uunsaanii dhimma yoomillee dagatamuu hin qabneedha.
Haaluma walfakkaatuun, bu’aaleen misoomaa waggoottan darban galmeessisaa turres, fedhii ummataa fi dheebuu misoomaa guddachaa deemu waliin yeroo walbira qabamee madaalamu hojiin nu hafu baay'ee ulfaataa fi bal'aa akka ta'e kan nuu mirkaneessudhaa.
Gama kanaan, kutaaleen hawaasaa tokko tokko, keessattuu, dargaggoonni fi dubartoonni keenya bu’aa misoomaarraa argachuu malan sadarkaa barbaadamutti yeroo argachuu dhaban ni mul’ata. Kanaaf, haalli kun, hojii dhabdummaa babal’isuun dargaggoota keenya biratti abdii kutannaa akka hin uumne, carraa gama kanaan jiru daguugnee fayyadamuuniifi dameewwan carraa hojii bal'inaan uumuu danda'an irratti xiyyeeffachuun hojjechuu kan nu gaafatu ta’ee argama.
Rakkoolee bulchiinsa gaarii jireenya ummata keenyaa guyyaa guyyaa danqanii qaban sirriitti addaan baafnee hirmaannaafi miira abbummaa ummataatiin hiikuu qabna.
Keessattuu, tajaajila saffisaa, qulqulluufi haqa-qabeessa ta'e argachuun mirga ummata keenyaa ta'us, ilaalchi tajaajiltummaa hoggansaafi sivil sarvaantii keenya bira jiru gaaffiifi fedhii ummata keenyaa wajjin kan wal-madaalu waan hin taaneef kenni tajaajilaafi hojimaati Manneen Hojii Mootummaa tokko tokko keessatti mul'ataa jiran komii ummataatiif ka’umsa ta'anii waan itti fufaniif dhimmoota xiyyeeffannaa Caffee kanaa barbaadan ta’anii argamu.
Walumaagalatti, hojiilee raawwanne caalaa kan nu hafan ulfaataa fi tumsa caasaalee mootummaa, humnoota misoomaa fi deeggarsa hawaasa keenya maraa kan gaafatan waan ta’aniif; gamtaan dhaabbachuun harka walqabanneefi caalmaatti qindoofnee hojjechuudhaan imaanaa ummataa gahumsaan akka bahannu irra deebi’uun waamicha koo dabarsa.
Dhumarrattis, Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Bara Hojii 6ffaa, Waggaa 1ffaa har’a hojiisaa ifaan eegalu kun; yaa’ii isaa duraatiin hoggantoota qaamolee mootummaa naannoo keenyaa filachuun, moggaasuuniifi muuduun Mootummaa Naannichaa hundeessuun Yaa’ii Duraa Caffee Bara Hojii 6ffaa, Waggaa 1ffaa kan xumuru ta’a.
Toorbee kana 9824
Ji'a kana 7540
2008 irraa eggalee 5045028